के हो बाथज्वरो ? - Naya Patrika
के हो बाथज्वरो ?
डा. अरुणकुमार सिंह बालरोग विशेषज्ञ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान | असोज २७, २०७४
बाथज्वरो अति गरिब राष्ट्रहरूमा बढी देखिने रोग हो । नेपालजस्ता अति कम आयस्रोत र अस्वस्थ वातावरणमा बसोवास गर्ने बालबालिका यस रोगबाट बढी पीडित हुन्छन् । बाथज्वरो रोगको उपचार समयमै नभए मुटुका भल्भ खराब भई मुटु बिग्रिने भएकाले रोगबाट बच्न विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ । बालबालिकालाई घाँटी दुख्ने, थुक निल्न गाह्रो हुने, टन्सिल बढ्नेलगायतका समस्या हुन्छ । स्टेपटोकक्स बेटा हेमोलाइटिकस नामक ब्याक्टेरियाले गर्दा यो रोग देखिन्छ । बाथज्वरो भएका बिरामीमा मुख्यतः घाँटी दुख्ने र ज्वरो आउने, ज्वरोसहित जोर्नीहरू दुख्ने र सुन्निने, ज्वरोसहित मुटु दुख्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् । सामान्यतया स्टेप थ्रोटको सही उपचार हुन सकेन भने यो रोगको विकास हुन्छ ।
कुन उमेर समूहमा बढी हुन्छ ?
ल खासगरी यो समस्या ५ देखि १५ वर्षभित्रका बालबालिकामा बढी देखिन्छ । बाथज्वरो २४ वर्षभन्दा माथिको उमेरमा ज्यादै कम मात्रामा भएको पाइन्छ । बाथज्वरो पुरुषभन्दा महिलामा बढी हुने गर्छ ।
केही दिन घाँटी दुख्ने ।
ज्वरो बढ्दै गई १०३ देखि १०५ डिग्री फरेनहाइटसम्म हुने । ज्वरो तीन हप्तासम्म आउँछ भने कहिलेकाहीँ तीन महिनासम्म पनि आउन सक्छ ।
शरीरमा पसिना अधिक मात्रामा आउनु । पसिना आए पनि ज्वरो नघट्नु । नाडीको गति तीव्र हुनु ।
नाडी, कुहिना, घुँडाजस्ता ठूला जोर्नीहरू बढी दुख्नु ।
जोर्नीहरू सुन्निनु । ज्वरो आउँदा दुखेको वा सुन्निएको पहिलो जोर्नीपछि दोस्रो जोर्नी दुखेमा पहिलो जोर्नीको दुखाइ
बाथज्वरोको अवस्था खराब भएमा शरीरमा डल्ला गाँठाहरू देखिन्छन् । गाँठा एक सोन्टिमिटरदेखि डेढ सेन्टिमिटरसम्मका हुन्छन् ।
छालामुनिका हाडहरू जस्तै– टाउकोपछाडिको भाग, कुमपछाडि, ढाड, हात–खुट्टाको अघिल्लो भागको हाडमा यस्ता गिर्खा भेटिन्छन् ।
कम्मरको छेउको भाग र नितम्बतिर रातो चक्काजस्तो देखिनु ।
कहिलेकाहीँ ज्रिबो, हात–खुट्टा आफैँ चलिरहन्छन् । यसलाई युमाटिक कोरिया भनिन्छ ।
बाथज्वरोले मुटुका तीन तह पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम र इन्डोकार्डियम सुन्निएर मुटु दुख्ने, मुटुका भल्भहरू खराब गर्ने र मुटुको आकार ठूलो भएर जाने गर्छ ।
वातावरण स्वस्थ बनाउनुका साथै खासगरी बालबालिकाका लागि पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । घाँटी दुख्ने, हल्का ज्वरो आउने, जोर्नीहरू दुख्नेजस्ता समस्या आउँदा वेलैमा उपचार गर्नुपर्छ । यति मात्र गर्न सकेमा पनि बालबालिकालाई मुटुको बाथरोगबाट धेरै हदसम्म बचाउन सकिन्छ ।
बाथज्वरो भएको हो वा होइन भनेर थाहा पाउन रगत परीक्षण गर्नुपर्छ । रक्तपरीक्षणमा सेता रक्तकोषको संख्या निकै बढी देखिन्छ । मुटुमा यस रोगले कुनै खराबी गरेको छ वा छैन भनेर थाहा पाउन इलेक्ट्रोग्राफी र इलेक्ट्रोग्राम गर्नुपर्छ ।